Mpanamboatra tavoahangy / tavoahangy fitaratra, mpamatsy - Sinaina fitaratra tavoahangy / tavoahangin-tsakafo China
12oz 350ml famoahana savony vita amin'ny savony vita amin'ny paompy ho an'ny fanasana rano madio
Ity tavoahangy fitaratra mazava ity dia safidy mety tsara hitahirizana tsara savony, menaka fanosotra ary maro hafa., Miaraka amina ambany matevina izay toa endrika kanto, maimaim-poana BPA ny paompy mihosin-plastika ary azo amboarina ny loko. Diniho ny fividianana betsaka mba hankafizanay ny vidin'ny ambongadiny
355ml 12oz tavoahangy savony vita amin'ny vera mazava miaraka amin'ny dispenser matte vy tsy misy fangarony
Ny tavoahangy boribory fitaratra mangarahara 12oz misy paompy dispenser vy tsy misy fangarony dia azo averina soloina ary mahomby. Azo ampiasaina amin'ny menaka fanosotra, savony, detergents na fandrahoana sakafo izy ireo. Ny tampon'ny vy tsy misy fangarony amin'ny tavoahangy fitaratra dia mateza tokoa. Ny vy vy dia azo sasana, ampiasaina ary diovina araka izay ilaina, ary azo tazonina ho an'ny tanjona rehetra; ireo tavoahangy fitaratra ireo dia vita amin'ny vera matevina ary azo sasana amin'ny fanasana vilia.
Tavoahangy savony 400ml vita amin'ny vera misy tavoahangy vita amin'ny vy tsy misy fangarony sy tanany vita amin'ny silika
Ireo tavoahangy fitaratra mazava boribory boribory any Boston ireo dia safidy mety tsara hitahirizana tsara savony, menaka fanosotra, menaka ary maro hafa. Tsy ho harafesina ny paompy volom-boasary miloko volafotsy 304 vita amin'ny vy. Izahay koa dia manome ny fototra silika miaro an'ireo tavoahangy paompy!
Tavoahangy savony boribory vera boribory 8oz miaraka amina paompy dispenser plastika
Classical ho an'ny trano fandroana na lakozia rehetra. Ity mpizara sabon-kazo veromanitra 8oz ity dia fitoeran-jaza kanto amin'ny vokatrao safidinao. Ny paompy plastika mainty dia azo esorina mba hamongorana ny tavoahangy, izay mampihena ny fako fonosana ary safidy mety amin'ny fanasana tanana. Ny singa fototra amin'ny vera amber (fasika, lavenona soda ary vatosokay) dia avy any an-toerana mba hiarovana ny atiny amin'ireo taratra UV.
Tavoahangy paompy boribory boribory 16oz misy tavoahangy plastika
Ity tavoahangy fitaratra mangarahara miaraka amin'ny dispenser ity dia fomba iray mora entina manadio tanana. Ny tampon'ny paompy dia tsy voahodina, izay afaka mameno ny tavoahanginao amin'ny vokatra voafantina mandritra ny fotoana maharitra ary mampihena ny fako fonosana. Ny vera mazava dia toa tsara tarehy miaraka amin'ny savony madio na miloko, manampy endrika voajanahary sy tsotra amin'ny trano fandroana rehetra. Classical ho an'ny trano fandroana na lakozia rehetra. Miaraka amin'ny marika kapoka mba hahafahanao manoratra ny tanjon'ny fampiasana eo aminy!
8oz 16oz matte tavoahangy savony dispenser ranona mainty
Ity tavoahangy savony vita amin'ny savony mainty vita amin'ny vera ity misy paompy plastika mainty, azo ampiasaina amin'ny 8oz, 16oz, 32oz ary ny fahafaha-manao hafa. Mety amin'ny savony, shampooing, conditioner, fanasan-vatana, sanitisera tanana ary vokatra hafa azo avy amin'ny rano.
Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy,